Stadia, गुगल को नयाँ अनलाइन खेल प्लेटफार्म, आउँछ | ग्याजेट समाचार
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | घटनाक्रमहरू, सामान्य, प्रस्तुतिकरण
हामी यो घोषणा गरिरहेको थियो, यो केवल समयको कुरा मात्र हो जुन राजधानी जी संग विशाल कम्पनीले भिडियो खेलमा चासो लिएको थियो। र हालका महिनाहरूमा अनुमान गरिएको छ, त्यो क्षण आयो। Stadia, "गेमरहरू" को लागि ब्रान्ड नयाँ प्लेटफर्म जुनसँग गुगल भिडियो खेलहरूको विश्वमा पूर्ण रूपमा प्रवेश गर्दछ पहिले नै एक वास्तविकता छ। र राम्रो को लागी वा नराम्रो को लागी, कसैलाई उदासीन छोडेको छैन.
अन्तिम हामीसँग गुगल कन्सोल छैन। धेरैका लागि यो निराशा हो किनभने तिनीहरू गुगलले यस उद्योगलाई निर्माण गर्न र योगदान पुर्‍याउन सक्षम छ भनेर हेर्न चाहेका थिए। तर अर्को तर्फ, कुनै पनि स्क्रिनमा र कुनै पनि समयमा तपाईंको सबै खेलहरू खेल्न सक्षम हुनुको अवधारणा पनि ध्यान आकर्षण गरीएको छ र धेरै लोकप्रिय छ। हामीलाई थाहा थियो गुगलले हामीलाई सांसारिक केहि चीजको साथ प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाउँदैन, र यो छ।
1 Stadia कन्सोल होईन ... तर हामीलाई यो मनपर्दछ
2 यस खेलमा जो कोहीसँग तपाइँको खेल साझा गर्नुहोस्
3 थप Stadia उपकरणहरू छैन
4 स्ट्याडियाको बारेमा हामीलाई के अझै थाहा छैन
Stadia कन्सोल होईन ... तर हामीलाई यो मनपर्दछ
Google ले विकास स्तरमा रहेको सम्भाव्यताबारे जान्दै हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुराको आशा गरेका थियौं। हप्तासम्म यो विभिन्न मीडिया मा टिप्पणी गरिएको छ कि उनले हामीलाई के देखाउने केहि संग हुनेछ खेलको नेटफ्लिक्स। तर यो केहि छ कि यो स्पष्ट छैनखेलको लागि सदस्यता वा वर्दी मूल्यको कुरा पनि भएको छैन। त्यसैले हामी भरोसा गर्न सक्ने सेवाको प्रकारको बारेमा हामी निश्चित रूपमा कुरा गर्न सक्दैनौं।
गुगलले हामीलाई पठाउन कोसिस गर्यो एक धेरै स्पष्ट अवधारणा। भविष्यमा, सधैं नजिक, हामीलाई कन्सोल चाहिदैन हाम्रो मनपर्ने खेल खेल्न। हामी हाम्रो टिभीमा ल्यापटपमा सुरु गरेको खेललाई पछ्याउन सक्छौं। र जब हामी बाहिर जान्छौं, उही क्षणको लागि उही खेलको पालना गर्नुहोस् जुन हामी स्मार्टफोनमा थियौं। दुबै अवस्थाहरू वास्तविक सफलता जस्तो देखिन्छ, र हामी यसलाई मन पराउँछौं। तर संग धेरै विवरण निर्दिष्ट गर्न अहिले
स्ट्याडियाले प्रस्ताव गर्ने गेमप्लेको बारेमा कुरा गर्ने अर्को नवीनता हो साझेदारी स्क्रिन भएको सम्भावना। एक सम्भावना जुन खेलमा निर्भर गर्दछ, अहिले सम्म यो जटिल देखिन्थ्यो। यो विकल्प प्रस्ताव गर्न आवश्यक कम्प्युटि power शक्ति अप्रापनीय थियो, यद्यपि यस्तो देखिन्छ कि Stadia ले यी चाँडै यी अवरोधहरू हटाउनेछ र खेलाडीहरूले स्वागत गर्नेछन्।
गुगल भिडियो खेलको संसारमा उत्तम हुन चाहन्छ। र यसका कम्पनीहरू छन् जुन यस क्षेत्रका मापदण्ड हो। तर पनि योगदानको साथ जुन खेलको संसारमा साना कारखानाहरूले प्रस्ताव गर्न सक्दछ। यसैले, गुगलले विकासकर्तालाई सबै समाचार प्रदान गर्दछ Stadia को निर्माण मा सहयोग गरी सबै कम्पनीहरु को। यस तरिकाले, यो सुनिश्चित हुन्छ कि ठूलो जीको पूर्ण सम्भावनाको साथ, उनीहरूले यो नयाँ प्लेटफर्मको लागि सामग्री सिर्जना गर्ने कुरामा शर्त राख्छन्।
यस खेलमा जो कोहीसँग तपाइँको खेल साझा गर्नुहोस्
एक चीज जुन खेल फ्यानहरूलाई सबैभन्दा मनपर्दछ तपाइँको खेल साझा गर्न सक्षम हुनुहोस् बाँकी संग। हाम्रो खेलमा अन्य खेलाडीहरूको एकीकरण स्वचालित रूपमा हुनेछ। र हामीले प्रदर्शन भिडियोमा हेर्‍यौं यो धेरै हुनेछ एक समर्पित बटन को लागी सजिलो धन्यवाद यसको लागी। हाम्रो खेलमा अन्य खेलाडीहरूलाई आमन्त्रित गर्न सक्षम हुनु सहज र छिटो हुनेछ। र सबै माथि हामी यो मञ्चबाटै गर्न सक्दछौं र हाम्रो खेल रोक्न आवश्यकता बिना।
फ्लाईमा खेलमा खेलाडीहरू थप्ने जस्ता विकल्पहरू पाउँदा केवल केही व्यक्तिहरू मात्र आश्वासन दिन सकिन्छ, र गुगल पनि तिनीहरूमध्ये एक हो। यो पनि हिजोको प्रस्तुतीकरणको बेला घोषणा गरियो कि स्ट्याडियाले केहि प्रदर्शन गर्ने छन प्रत्येक खेलको लागि निर्दिष्ट गाईडहरू। केहि चीजहरू जुन भर्खरका हप्ताहरूमा अनुमान गरिएको थियो। तर केहि हामीसँग छैन त्यो हो खेलमा गाईडको आफ्नै एकीकरण। र यसले हामीलाई प्रस्ताव गर्न मद्दत गर्दछ Utions समाधानहरू the ठ्याक्कै क्षणमा जुन हामी आफैंलाई सुरू गरिरहेको पाउँछौं। अर्को प्रेम जुन हामी प्रेम गर्दछौं।
Stadia, कम्तिमा अहिलेको लागि, यस भन्दा बढि केहि छैन एक महान वैचारिक हिस्सा संग खेल को लागी एक मंच के बारे मा निर्दिष्ट गर्न को लागी धेरै छ। एउटा प्लेटफर्म, हो, Google जस्तै आकारको साथ। र यो डाटा केन्द्रहरूमा आधारित छ जुन गुगलले हाम्रो ग्रहभरि छ। अचम्म मान्नुपर्दैन, आज उनको सबैभन्दा दोहोर्याइएको नारा हो "डाटा सेन्टर तपाईको प्लेटफर्म हो".
थप Stadia उपकरणहरू छैन
हामीले सुरूमा भनेझैं, गुगलले अन्त्यमा शारीरिक कन्सोल सिर्जना गर्न शर्त नराखेको थाहा पाएपछि केही निराश हुन्छन्। तर तिनीहरूले विचार प्रस्ताव अर्को उपकरणको आवश्यक नहुनु पनि एक अग्रिम हो। खेल फ्यानहरू र अधिक आधारभूत टेक्नोलोजीका प्रयोगकर्ताहरूले दिनको न्यूनतम दुई, तीन र चार उपकरणहरू प्रयोग गर्दछन्। कम्तिमा, र लगभग आवश्यक, हामी दैनिक स्मार्टफोन प्रयोग गर्दछौं। यसमा हामी थप्छौं, सायद केही हेडफोनहरू। त्यसपछि ल्यापटप, र यदि हामी प्ले गर्न चाहन्छौं, कन्सोल पनि।
यद्यपि हामी एक अत्यावश्यक तत्वबाट छुटकारा पाउन सक्दैनौं जुन गेमि experience अनुभवलाई पूर्ण रूपमा पुरस्कृत गर्दछ, नियन्त्रणकर्ता। को Stadia नियन्त्रक, जसमा छविहरू पहिले नै चुहावट गरिएको थियो, हामीलाई यो मनपर्‍यो। एक परम्परागत डिजाइन त्यो पछिल्लो टेक्नोलोजी लाई लुकाउँछ हाम्रो खेल सीधा यूट्यूबमा साझा गर्न बटन, वा एक आवाज सहायक। यो हुनेछ USB प्रकार सी मार्फत चार्ज गर्दै, जडान wifi, पोर्ट हेडफोन ज्याक र तीन रंग सेटिंग्स.
हामी कसरी हेर्छौं विकल्पहरू हराउनु बिना नै "हटाउनुहोस्" उपकरणहरू, र गेमप्ले वास्तवमै केहि नयाँ होइन। कन्सोलको आवाश्यकता बिना नै अहिलेसम्म अझ समान खेल खेल्न सक्षम हुँदै, र अधिक धेरै। वा टेलिभिजन जहाँ हामीसँग सँधै यो जडित छ गतिशीलता धेरै बनाउँछ। र हामीले टिप्पणी गरे झैं, हामी यो खेल नगुमाईकन गर्न सक्दछौं र केवल उही कुरालाई पछ्याएर यसलाई अझ राम्रो बनाउँदछ। कुनै बक्सहरू, कुनै डाउनलोडहरू, सीमा छैन.
हामी जहिले पनि प्रगतिको साक्षी दिन चाहन्छौं। र Stadia निस्सन्देह विशाल भिडियो खेल उद्योगमा पहिले र पछिको हुनेछ। एक अग्रिम जुन सधैंको लागि प्रयोगकर्ताहरूको लागि सकरात्मक हुनेछ। अनि त्यो हामी कुर्छा que सेवा दिनुहोस् कि सबै भन्दा सीधा प्रतिद्वन्द्वी जस्तै माइक्रोसफ्ट वा सोनी नोट लिनुहोस् सुधार को र उनलाई पार गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस्। यो स्पष्ट छ कि उद्योग परिवर्तन हुन्छन् र हामी हेर्ने छौं कि बाँकी फर्महरू यो नयाँ चरणमा गुगल अनुसरण गर्न सक्षम छन्।
स्ट्याडियाको बारेमा हामीलाई के अझै थाहा छैन
अपेक्षाकृत मनोरन्जनकारी र गतिशील प्रस्तुति पछि, पाइपलाइनमा धेरै प्रश्नहरू बाँकी छन्। हामीसँगै बस्छौं धेरै वास्तवमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। हामी Stadia को गर्मी मा हुनेछ खेल को सूची को बारे मा अधिक जान्न गुगल द्वारा राखिएको छ। तर त्यहाँ धेरै कुरा छन् जुन हामीलाई बताइएको छैन, र ती मध्ये धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। यी हप्ताहरूमा ठूलो शंकाहरू मध्ये एक, र त्यो हावामा रहिरहनेछ स्टाडियाको व्यापार स्तरमा सञ्चालन हो।
यो मासिक सदस्यता संग काम गर्दछ? हामीलाई थाहा छैन यदि हामी मासिक शुल्क तिरेर Stadia प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछौं। र निस्सन्देह, हामीलाई थाहा छैन, यदि हो भने, हामी कति कुरा गर्छौं। यो स्पष्ट छैन। अर्को विकल्प, यदि यो सदस्यता सेवा छैन भने, खेलहरू खरीद गर्न सक्दछ, वा प्रत्येक खेलको एक प्रकारको "भाडा" पनि हुन सक्छ। गुगलले हामीलाई अधिक स्पष्टीकरण नगरेसम्म हामी अनुमानहरू गर्न जारी रहनेछौं।
अर्को महत्त्वपूर्ण गल्ती बिन्दुहरू, हामीलाई कनेक्शन गतिको लागि न्यूनतम आवश्यकताहरू थाहा छैन कि हामी Stadia को उपयोग गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ। सबैभन्दा माथि F० एफपीएसमा K के एचडीआरको प्रस्तुतीकरणमा छलफल गरिएका रिजोलुसनहरूलाई ध्यानमा राख्दै। एउटा महत्त्वपूर्ण विवरण, हामीसँग रहेको कनेक्शनलाई ध्यानमा राख्दै, हामी नयाँ गुगल प्लेटफर्म मार्फत खेल्न सक्छौं कि भनेर जान्नका लागि।
र निस्सन्देह, गेमि world संसारका सबै फ्यानहरूका लागि यो हो यो खेल सूची जान्न आवश्यक छ हामी भर पर्न सक्छौं। यस अर्थमा, गुगलले गर्मीमा हामीलाई उद्धृत गर्छ। यस अज्ञात र हिजो हिजोमा छोडेका अन्य धेरैलाई जान्न हामीले अझ धेरै महिना कुर्नुपर्नेछ। एउटा प्लेटफर्ममा शर्त लगाउनु, जहाँ अझै धेरै धेरै थाहा हुन्छ, र यती महत्त्वपूर्ण, जोखिमपूर्ण देखिन्छ। यद्यपि हामीलाई देखाईएको अवधारणा मनपर्दछ र सुधार खेल र प्रविधिको स्तरमा हामी पर्याप्त छौं Stadia को बारे मा अधिक जानको लागि पर्खनुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » Stadia, गुगल को नयाँ अनलाइन खेल प्लेटफर्म, आउँछ